၂၀၁၈ ခုနှစ် ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များ
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ ၈၄ နိုင်ငံအတွင်း တက္ကသိုလ်ပေါင်း ၁၀၀၀ ခန့် ရှိပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် QS World University Ranking 2018 က ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ် ၁၀ ခုစာရင်းကို ထုတ်ပြန်ပါသည်။ ယင်းတို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ 1. Massachusetts Institute of Technology (MIT), 2.Stanford University, 3.Harvard University, 4.California Institute of Technology (Caltech), 5.University of Cambridge, 6.University of Oxford, 7.UCL (University College London), 8.Imperial College London, 9.University of Chicago, 10. ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)
MIT တက္ကသိုလ်၏ဆောင်ပုဒ်မှာ “Mind and Hand” ဖြစ်သည်။ ထိုဆောင်ပုဒ်သည် MIT တက္ကသိုလ် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်နေသော အထိရောက်ဆုံးဆောင်ပုဒ်လည်းဖြစ်သည်။ စိတ်ကူးနှင့် လက်တွေ့ကို နှိုင်းဟပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုမျှမကသော အနက်အဓိပ္ပာယ်လည်း ဆောင်ကောင်းဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ တက္ကသိုလ်တွင် အဓိကသင်ကြားနေသည့်ဘာသာရပ်များမှာ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးပညာ ရှင်များမွေးထုတ်ရာ နေရာတစ်နေရာဖြစ်စေရန် ကြိုးစားလျက်ရှိသည်။
MIT တက္ကသိုလ်ကို ၁၈၆၁ ခုနှစ်က စတင်ထူထောင်ခဲ့သည်။ သူတို့ အသိုက်အမြုံကို လူသားတို့အတွက် ပြဿနာပေါင်းစုံအား စုပေါင်းဖြေရှင်းသည့် နေရာ၊ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာကို ချစ်မြတ်နိုးသူများ စုဝေးပေါင်းစုကာ စူးစမ်းလေ့လာနေသည့် နေရာတစ်နေရာအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြသည်။ ယနေ့ဆိုလျှင် MIT တက္ကသိုလ်တွင် ဆရာပေါင်း ၁၀၀၀ ခန့်နှင့် ပညာသင်ယူနေကြသည့် ကျောင်းသားပေါင်း ၁၁၀၀ ကျော်ရှိသည်။
MIT သည် လွတ်လပ်သော၊ ပညာကို ပူးပေါင်းရှာဖွေသော၊ ပုဂ္ဂလိကထောက်ပံ့ငွေများဖြင့် ရပ်တည်နေသော အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုအနေနှင့်လည်း ထင်ရှားသည်။ သူ့လက်အောက်တွင် ပညာသင်ကြားပေးနေသည့် နယ်ပယ်ကြီး ငါးခုရှိသည်။ ဗိသုကာ၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ ဝိဇ္ဇာလူမှုရေးနှင့် လူမှုသိပ္ပံ၊ စီမံခန့်ခွဲရေးပညာ၊ သိပ္ပံပညာရပ်များဖြစ်သည်။ သို့သော် MIT ၏ ရပ်တည်ချက်မှာ တီထွင်ဖန်တီးမှုသာဖြစ်သည်။
MIT တွင် လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသော အထင်ရှားဆုံးသုတေသနလုပ်ငန်းမှာ AI ခေါ် Artificial Intelligence ပညာရပ်များဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသုတေသနလုပ်ငန်းများ၊ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ၊ ကင်ဆာ၊ ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေး စသည့်ပညာရပ်များကိုလည်း သုတေသနပြုလုပ်နေကြသည်။ MIT သည် ယခင်ကတည်းက ရေဒါ၊ သံလိုက်စွမ်းအင်ဖြင့် ဒေတာ အချက်အလက်များ ထိန်းသိမ်းမှု၊ အာကာသဆိုင်ရာ စူးစမ်းလေ့လာမှုပညာရပ်များတွင် နာမည်ရခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာသည် MIT ၏ အသက်ဖြစ်သည်။ ထိုပညာရပ်များကို လေ့လာမှုတွင် အကဲသာသည်ဆိုသော်လည်း ကျောင်းသား ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်မှာ အားကစားကိုလိုက်စားသူများဖြစ်သည်။ MIT ၏ လှေလှော်အသင်းသည် နာမည်ကျော်ဖြစ်သည်။
MIT တွင် ပြတိုက်ပေါင်း ၁၂ ခုရှိသည်။ နှစ်စဉ် လူပေါင်း ၁၂၅,၀၀၀ ခန့် လာရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်။ ဂီတ၊ ပြဇာတ်၊ စာပေ၊ အကတို့တွင် ပါဝင်နေသည့် ကျောင်းသား ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။ MIT တွင် Pulitzer Prize ဆုရသူပေါင်းများစွာရှိသည်။
တက္ကသိုလ်သည် မြေဧက အကျယ် ၁၆၈ ဧက ကျယ်ဝန်းသည်။ ကျောင်းဝင်းအတွင်း ရှေးဟောင်းလက်ရာအဆောက်အအုံကြီးများကို ယနေ့တိုင် ထိန်းသိမ်းထားသေးသည်။ MIT နှင့် ပေါင်းကူးဆက်သွယ်ထားသည့် ကုမ္ပဏီပေါင်း ၃၀,၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။ ယနေ့အထိ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါင်း ၄ ဒသမ ၆ သန်းကို ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးများတွင် MIT ဆင်း ကျောင်းသားများသည် အကောင်းဆုံး စီးပွားရေးသမားများအဖြစ်လည်း ထင်ရှားသည်။
ယနေ့အထိ တက်ရောက်သင်ကြားနေသည့် ကျောင်းသားပေါင်း ၁၁,၁၄၅ ဦးရှိသည်။ နိုင်ငံတကာမှ လာရောက်ပညာရှာနေသူ ၃၇၃၂ ဦးကို လက်ခံထားသည်။ ပညာသင်ကြားပေးနေသည့် ဆရာနှင့် ဝန်ထမ်းပေါင်း ၃၀၀၉ ဦးရှိသည်။
ပညာသင်စရိတ်မှာ ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများအတွက် ဒေါ်လာ ၄၈,၀၀၀ မှ ၅၀,၀၀၀ ဖြစ်ပြီး ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားများအတွက် ဒေါ်လာ ၄၈,၀၀၀ မှ ၅၀,၀၀၀ ဖြစ်သည်။ ထိုကုန်ကျစရိတ်မှ နှစ်စဉ်ပေးသွင်းရမည့် ငွေပမာဏဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဘာသာရပ်အလိုက် ငွေကြေးကွာခြားမှုရှိနိုင်သည်။
ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့တောင်ဘက် ၃၅ မိုင်အကွာ နှင့် ဆန်ဟိုဆေးမြို့ မြောက်ဘက် မိုင် ၂၀ အကွာတွင် ရှိသည်။ ကာလီဖိုးနီးယားမြောက်ပိုင်းရှိ ဆီလီကွန်တောင်ကြား နည်းပညာရပ်ဝန်းကြီး၏ အသည်းနှလုံး တက္ကသိုလ်ကြီးအဖြစ်လည်း တင်စားလေ့ရှိသည်။ Yahoo, Google, Hewlett-Packard စသည့် နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးများနှင့် အခြားထင်ရှားသော နည်းပညာရှင်ကြီးပေါင်းများစွာကို မွေးထုတ်ပေးခဲ့သော တက္ကသိုလ်ကြီးလည်းဖြစ်သည်။
Stanford တက္ကသိုလ်ကို ဘီလျံနာစက်ရုံ (Billionaire Factory) ဟူ၍လည်း တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကမ္ဘာ့ဘီလျံနာ အတော်များများမှာ ထိုကျောင်းထွက်များဖြစ်ကြသည်။ ဤကျောင်းထွက်များသည် ကိုယ့်ကမ္ဘာကို ကိုယ်တည်ဆောက်နိုင်သူများဖြစ်ကြပြီး ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးလောက ထိပ်တန်း ၁၀ ဦးဝင် ကျော်ကြားထင်ရှားသူများလည်း ဖြစ်ကြသည်။
ကျောင်းဝင်းကြီးက ၈၁၈၀ ဧက ကျယ်ဝန်းသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် အကျယ်ဆုံး ကျောင်းဝင်းကြီးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ကျောင်းထဲတွင် သုတေသနဌာနပေါင်း ၁၈ ခုနှင့် ကျောင်းခွဲပေါင်း ၇ ကျောင်း ထပ်ဖွင့်ထားသေးသည်။ Graduate School of Business; School of Earth, Energy & Environmental Sciences; Graduate School of Education; School of Engineering; School of Humanities and Sciences; Law School; School of Medicine ကျောင်းများဖြစ်သည်။
၁၈၈၅ ခုနှစ်ကတည်းက ထူထောင်ထားသည့် တက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်ပြီး ကာလီဖိုးနီးယားအမတ် လေးလန်းစတန်းဖို့ဒ်နှင့် သူ၏ဇနီးဖြစ်သူတို့က စတင်ထူထောင်ခဲ့သည်။ ပြည်သူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ၊ လူသားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုလုပ်ငန်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စတင်ထူထောင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ ဇနီးမောင်နှံ၏ တစ်ဦးတည်းသောကလေးသည် တိုက်ဖိုက်ရောဂါဖြင့် သေဆုံးသွားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့က မိမိတို့ခြံမြေကျယ်ကြီးထဲတွင် ကလေးကိုအမှတ်တရအဖြစ် တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုကို ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အစောပိုင်းကတည်းက ဂိုဏ်းစွဲ၊ အဖွဲ့ စွဲ မရှိ ပညာရေးကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကြိုးစားသင်ယူနိုင်ကြစေရန် ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ ဝိဇ္ဇာအပြင် သိပ္ပံပညာရပ်များကိုပါ သင်ကြားသည်။ အမေရိကပြည်သစ် တည်ဆောက်မည်ဆိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် စတင်ထူထောင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ရာစုနှစ်တစ်စုအကျော်တွင် Stanford တက္ကသိုလ်မှ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့သည့် နိုဘယ်လ်ဆုရှင်ပေါင်း ၁၉ ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့တက္ကသိုလ်များထဲတွင်လည်း အဆင့်သုံးအောက်မကျအောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့သည်။
Stanford ကျောင်းတော်ကြီးသည် ခြံမြေတစ်ခုက စတင်ပေါက်ဖွားသဖြင့် The Farm ဟူ၍လည်း အမည်တစ်မျိုးဖြင့် ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲကြသည်။ ယနေ့အထိလည်း တီထွင်ပညာရှင်ပေါင်း ၁၁,၀၀၀ ကို ထိုခြံကြီးထဲက မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ကျောင်းဝင်းကြီးအတွင်း၌ ဘွဲ့ကြိုနှင့် ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသား ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည် အဆောင်များတွင် နေထိုင်ကြသည်။ ကျောင်းသားများထဲတွင် အသားအရောင်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ ကွဲပြားမှုပေါင်းများစွာ ရှိသော်လည်း အတူတကွပူးပေါင်းနေထိုင်ကြသည်သာဖြစ်ပြီး ကျောင်းသားများ၏ ကိုယ်သန်ရာဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၆၂၅ ဖွဲ့ရှိသည်။
အားကစားလည်း ထူးချွန်ကြသည်။ အားကစား ကလပ်ပေါင်း ၃၂ ခုရှိသည်။ ဘေ့စ်ဘော၊ ဘောလုံး၊ ဘတ်စ်ကက်ဘော၊ စကွပ်အားကစားများတွင် ထင်ရှားသည်။ ထိုကျောင်းမှ အားကစားအသင်းများကို Stanford Cardinal ဟုခေါ်ကြသည်။
ကျောင်းဝင်းအတွင်း ကမ္ဘာ့အဆင့်မီပြတိုက်ကြီးနှစ်ခုရှိသည်။ ပြပွဲတွေကိုလည်း ပုံမှန်ပြုလုပ်သည်။ စားသောက်ခန်းမ ၈ ဆောင်ရှိသည်။ လက်တွေ့ချက်ပြုတ်ခန်း၊ အော်ဂဲနစ်ဥယျာဉ်တို့ကိုလည်း ထူထောင်ပေးထားသည်။ ဟောပြောပွဲများ လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးမှုများကို ခွင့်ပြုထားသည်။
တက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေသည့် ကျောင်းသားပေါင်း ၁၆,၁၃၅ ဦးရှိသည်။ နိုင်ငံတကာကျောင်းသား ၃၆၆၅ ဦး တက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေကြသည်။ ဆရာနှင့်ဝန်ထမ်းပေါင်း ၄၃၆၆ ဦးရှိသည်။
ပညာသင်စရိတ်မှာ ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများအတွက် ဒေါ်လာ ၄၆,၀၀၀ မှ ၄၈,၀၀၀ ဖြစ်ပြီး ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားများအတွက် ဒေါ်လာ ၄၆,၀၀၀ မှ ၄၈,၀၀၀ ဖြစ်သည်။ ထိုကုန်ကျစရိတ်မှ နှစ်စဉ်ပေးသွင်းရမည့် ငွေပမာဏဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဘာသာရပ်အလိုက် ငွေကြေးကွာခြားမှုရှိနိုင်သည်။